Ndo Disqus, abum onye ofufe ugbu a! | Martech Zone
Ndo Disqus, abum onye ofufe ugbu a!
Tuesday, June 16, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Site na nsogbu ndị a niile edozila, yana ọrụ Disqus na-abawanye na mmekọrịta ya na Social Media, ọ na-eme ọtụtụ echiche maka ndị na-ede blọgụ WordPress iji wụnye ngwa mgbakwunye na ijikọ ọrụ ahụ. Agbabeghị m IntenseDebate, ahụbeghịkwa m ozi ọma ma ọ bụ nkuchi banyere ya… onye ọ bụla na-eji ya?
Thedị ndị ahụ nọ na Disqus kwere ka m bupu ọdịnaya na nkọwa m nke blog site na XML ma bulite ya na ndị otu na-akwado ha. Ha na-akwagazi ihe ndị okenye na-ekwu site na blọọgụ ha na igwe ha. Mara mma!
Ya mere… ndị ọrụ nọ na Disqus, eji m gị mgbaghara maka inye ngwa gị ọkwa dara ada. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ziri ezi ịme n'oge ahụ, abụ m onye ofufe ugbu a! Nwere ezigbo ngwaahịa na m hụrụ n'anya njikọta Twitter!
Tags: usoro okwuịza ajụjụ usoroDisqus
Oghere na Teknụzụ Azụmaahịa?
Gbanwee Search Search Engine na Safari na agụ owuru
Jun 16, 2009 na 10: 06 PM
Enwere m nsogbu ụfọdụ na Disqus, mana na tiori ọ bụ ezigbo ngwa mgbakwunye. Enwere m mmasị otú ha si zitere m ozi ịntanetị mgbe mmadụ kwuru, mana n'ozuzu usoro ahụ arụghịrị m ọrụ. Kedu ihe ị chere gbasara sistemụ ha weghaara SezWho?
Jun 16, 2009 na 6: 15 PM
Obi dị m ụtọ na m nwere ike inyere =) Enwere m onwe m ịpị m ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla ọzọ.
Onye nwe obodo
Ọkt 10, 2009 na 10:46 PM
Anọ m n'otu ụgbọ mmiri ahụ, si na WordPress gaa naanị na Disqus ma nwee otu nsogbu ahụ wee gaa IntenseDebate ma na-anwalezi Disqus ọzọ n'ihi na ID bụ ụdị nsogbu niile.
My Disqus yiri ka o nwere otu nsogbu onye ọ bụla ọzọ nwere WordPress 2.8.4, ọ gaghị ebubata okwu.
Agam achighari ya wee choo ihe ozo…. ọzọ?
Feb 22, 2011 n’elekere 3:59 nke abali
Ekwesịrị m ikwenye - ntutu isi akwụkwọ mpempe akwụkwọ na DoAX2 bụ naanị ihe mkpofu.
Ọkt 14, 2011 na 1:11 AM
Ọ bụ ezigbo egwu post na disqus
Ọkt 30, 2011 na 8:09 PM
Ọkt 30, 2011 na 8:59 PM
Echere m na ọ dị nzuzu na ndị spammers ejiriwo ụlọ ọrụ ahụ jọọ njọ nke na anyị kwesịrị inwe usoro n'ime ebe dị ka logins; Otú ọ dị, maka saịtị azụmahịa - ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma bụrụ nnukwu ụzọ isi nakọta ụfọdụ ozi gbasara atụmanya.
Onye Isi Uche 1130
Dee 19, 2013 na 9: 29 AM
Kedu ihe ị bu n'uche site na "spam"?
Ahụrụ m Disqus n'anya, dị mfe iji wụnye ma dị mfe iji. Ekwenyere Douglas banyere na ọ dị mkpa ịnwe logins, opekata mpe enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịbanye, google, yahoo, facebook, twitter wdg.
Feb 22, 2012 na 7:08 PM
M nnọọ hụrụ ya n'anya. Ọ bụ nnọọ ihe enyemaka mfe iji.
Daalụ maka iwepụta oge iji tụlee nke a, enwere m mmetụta siri ike
banyere ya ma nwee mmasị ịmụtakwu banyere isiokwu a. Ọ bụrụ na o kwere omume, ka ị na-erite
nka, ị ga-echedo imelite blog gị na ozi ndị ọzọ? Ọ bụ
nyere m aka nke ukwuu.
Apr 18, 2012 na 6: 58 AM
Ọ na-amasị m ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ! Ọ dịkarịrị mfe iji ọha mmadụ karịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ịza ajụjụ ọ bụla "dị ọcha" m nwere ike iche.
Nov 16, 2012 na 1:14 PM
Disqus di egwu !!
Amaghị nke ọma ma ọ bụrụ na ọ kachasị mma ịza ajụjụ na ikpo okwu, mana Disqus toro n'ezie n'ike n'ike n'afọ gara aga ma ọ bụ abụọ.
Anwara iji ngwa mgbakwunye, mana ijide dị ka nke ugbu a. Ọtụtụ plugins ugbua, gụnyere nke maka ihe FB.